Sidee Xawaaraha Goobtu Saameyn Ugu Leeyahay Heerarka Is-Beddelka Macaamiil Ganacsi | Martech Zone
Waxaan isku darnay barnaamij abaalmarin ah waxaanna soo saarnay dhowr qalab casri ah oo shaqsiyadeed oo casriyeysan oo loogu talagalay macmiilka elektaroonigga ah oo si weyn kor ugu qaaday dakhligooda.
Markii aan sii wadnay inaan daawanno dadka isticmaala ee ka soo baxaya emayllada iyada oo loo marayo beddelaad, waxaan ku ogaanay arrimo dhowr ah oo ku saabsan martigelintooda iyo barxadda si weyn u saameysey xawaaraha goobta - jahwareerinta macaamiishooda mustaqbalka iyo kor u qaadista heerarka dayaca kor - gaar ahaan mobile qalabka.
Way fiicantahay in laga shaqeeyo soo iibinta suuqgeynta, haynta, kor u qaadista, iyo kordhinta iskucelceliska qiimaha otomatiga ee e-commerce… laakiin xawaaraha bartaada iyo khibradaada wax iibsiga mooyee mooyee, ma sareynaysid soo noqoshada maalgashiga suuq geynta. Sidoo kale, boggaaga elektaroonigga ah waa in lagu tijaabiyaa dhowr siyaabood oo kala duwan si loo hubiyo in xawaaraha uu si joogto ah u wanaagsan yahay:
Miyuu boggaaga elektaroonigga ahi si joogto ah ugu deg degaa dhammaan daalacashada?
Miyuu boggaaga elektaroonigga ah si joogto ah ugu socdaa dhammaan qalabka moobiilka?
Miyuu boggaaga elektaroonigga ah si isdaba joog ah ugu socdaa dhammaan qalabka desktop-ka?
Miyuu boggaaga elektaroonigga ahi si joogto ah ugu socdaa dhammaan gobollada juqraafiyeed ee aad u adeegto?
Miyuu yahay bartaada elektaroonigga ah si isdaba joog ah marka ay kuu soo booqdaan dad badan oo goobtaada jooga?
Kala qaybinta waxqabadka xawaaraha ee bartaada iyo cabirka heerarka beddelka qaybahaan oo dhan waa mid muhiim ah oo tilmaami kara arrimo iftiimaya qaarkood oo saameyn ku yeelan doona heerarka beddelashada.
Heerarka Bounce ee Xawaaraha Bogga
Su'aal kama taagna saameynta guud ee xawaaraha bogga marka laga hadlayo heerarka ka tagitaanka:
Xawaaraha E-Ganacsi ee Xawaaraha
Macaamiisha wax cabsi ah kama qabaan inay wax ku iibsadaan aaladda moobaylka sidii markii horeba. E-commerce-ka moobiilka waa mid aad u fiican… haddii booqdahaaga uu daawanayo shaashad kale ama wadahadal iyo wax ka iibsiga aaladda moobilkooda, xawaarahaaga, iyo wadada aad u beddeleyso waa inay si dhib la'aan u shaqeeyaan, haddii kale way iska boodayaan gebi ahaanba ama waxay ka tagayaan gaariga ay wataan ' waan bilaabay. Fiiri kala duwanaanta dabeecadeed ee udhaxeysa aaladaha:
A booqdaha wareega waxay ka badan tahay laba jeer ka badan sidii ay uga soo kici lahayd goob ka badan a booqdaha desktop.
Iyo sidee taa ugu tarjumaysaa habdhaqanka dukaamaysiga elektaroonigga ah ee moobiilka? Way weyn tahay:
Horumar 100-millisekond ah ayaa kordhiya tafaariiqda sicir-bararka by 8.4%
Horumar 100-millisekond ah ayaa kordhiya tafaariiqda celceliska qiimaha dalabka (AOV) 8.4%
Horumar 100-millisekond ah wuxuu kordhiyaa sumadda raaxada aragtida bogga by 8.4%
Xaqiiqdii, halkan waxaa ah 4 daraasad kiis oo ku saabsan saameynta xawaaraha bogga e-commerce:
Amazon waxay waayi lahayd $ 1.6 bilyan sanadkii haddii xawaaraha goobta uu hoos u dhaco 1 ilbidhiqsi.
Xeryaha waxay arkeen 10% koror ah sicirka beddelashada markii ay yareysey waqtigeeda culeyska bogga guriga 1 ilbidhiqsi.
Walmart waxay aragtay 2% koror ah sicirka beddelaad kasta oo 1 ilbiriqsi oo horumar ah ee bogagga waqtiyada rarka.
AliExpress wuxuu yareeyay waqtiga xamuulka bogga 36% wuxuuna arkay 10.5% kordhinta amarrada iyo 27% kororka ku-beddelka macaamiisha cusub.
Aldo wuxuu ogaaday in adeegsadayaasha moobiillada ee khibrada u leh waqtiyada bixinta ay keeneen 75% dakhli ka badan celcelis ahaan iyo 327% dakhli ka badan kuwa la soo dersa xilliyada bixinta.
Sidee Muhiim Ugu Yahay Xawaaraha Websaydhka E-Ganacsiga?
88% booqdayaashu waxay doortaan tafaariiqleyaal internetka ah oo keena khibrad websaydh wax-qabad leh.
$ 18 bilyan ayaa lagu lumiyaa sanad walba sababo la xiriira gawaarida wax iibsiga.
Macaamiisha waxay xasuustaan ​​waqtiyada xawilaadda khadka tooska ah inay 35% ka dheer yihiin sida dhabta ah.
Waxbadan ayaan ka qornay arrimaha saameeya waqtiyada xamuulka bogga waxaana kugu dhiiri galin lahaa inaad ka shaqeyso xawaaraha bogga ka hor waxaad bilaabeysaa inaad dadka u keento bartaada.
Tirakoobyadan iyo sawiradan ayaa lagu bixiyay
Hagaha Dhismaha Websaydhka ee hagaha cusub ee la bilaabay Istaatistikada Waqtiga Websaydhka - Maxaa Xawaareynaya Arrimaha 2020. Adeegsiga tirakoobyo faahfaahsan, hantida naqshadeynta jilicsan, iyo daraasadaha kiisaska xirfadeed, hagaha wuxuu muujinayaa baahida weyn ee loo qabo deg deg deg deg deg deg ah deg deg ah si macaamiisha internetka looga dhigo kuwo qanacsan oo daacad u ah dukaamada ganacsiga ee e-commerce.
Akhriso Sababta Xawaareyntu Ugu Jirto 2020
Tags: AldoAmazoncelceliska qiimaha dalabkaheerarka soo kabashada marka labaadsicir-bararkaheerarka beddelashada desktopxawaaraha ganacsiga mobiladakombiyuutarka elektarooniga aharagtida boggabogag booqashokiibaqabatooyin